Wena wafuna ukwazi ukuthi imibhalo kudingeka sokubhalisa ingane nesabelo
Wabona ukuthi baqinisile nokuthola usizo zomphakathi ezivela isimo ... Yini imibhalo kudingeka sokubhalisa nesabelo ingane? Ake sibheke yiziphi izinzuzo kanye lokho abayikho zilwane.
Ngakho, ngo-Russian ingane izibonelelo ngo-2013, kukhona lezi zinhlobo ezilandelayo: inkokhelo yesikhathi esisodwa ngesikhathi sokuzalwa, omama basize, ephakamisela esacathula kanye eminyakeni nesigamu, futhi lokho okubizwa ngokuthi "abantwana" abakhokhelwayo ukuze izingane baze bafinyelele eminyakeni yobudala eyi-18. Uma izinhlobo ezimbili lokuqala usizo lomphakathi bangalindela zonke izakhamuzi, ukuze uthole nyangazonke ingane support, kubalulekile ukuze singene isigaba imikhaya ehola kancane, okungukuthi, ukuba engenayo ngezansi ezingeni le mihlangano.
Bangaki uzokhokha nalapho ukudweba ingane inzuzo?
Lapho kuzalwa ingane owesifazane Russian ithole inkulungwane ezilitshumi Muscovite - 15 ruble 500. iminyaka nesigamu umama bangathembela 40% emholweni wakhe, noma analinye amawaka ruble anamakhulu mahlanu, uma ingane yokuqala yesibili ukukhokha kancane xaxa - ruble ayizigidi ezintathu, "izingane" kuzo zonke izifunda zakhe, okungenani ilungiswe ruble 70, esiphezulu - e ruble 1000 eMoscow. Hlola noma iyiphi nezinzuzo zezenhlalo zingaba enkonzweni, okuthiwa "ifasitela Single" futhi libhekisela ekuphathweni zikahulumeni wendawo.
Yini imibhalo kudingeka sokubhalisa ingane inzuzo esimweni nokubeletha, futhi amnakekele?
Kuyadingeka ukuba abhale isicelo nelungelo, ukunikeza iphasipoti, isitifiketi yomzali lokuzalwa futhi ikhophi umntwana. Ngaphezu kwalokho, kufanele athathe isitifiketi esibeka ukuthi ngaphambili usizo lomphakathi ezinjalo kuwe is hhayi ozibekile, kanye ulwazi umama lemali zarabotoy ibhodi izinyanga eziyishumi nambili ezidlule.
Yini imibhalo kudingeka sokubhalisa ingane inzuzo izingane eziye zaphetha engu-3 ubudala, kodwa abangakabi 18?
Nasi kancane more xaka. izinkokhelo ezinjalo aqokwa kuphela uma imali umuntu ngamunye nomndeni (abazali nezingane) ngeke idlule izindleko zokuphila. Yonke indawo kubhekwa okwehlukile: endaweni ethile ngokwengeziwe, endaweni ethile encane. Kumele unikeze ipasipoti abantu abadala, usizo-isitatimende of the ukwakheka umndeni (kwezinye izindawo ezidinga kula endlini yencwadi), idokhumenti ku ukuzalwa kwezingane, isitifiketi imali etholwe zokugcina izinyanga ezintathu umsebenzi, noma ngobukhulu izimpesheni nezinye izibonelelo, imifundaze, ingane, uma kuwukuthi isikole phakathi noma okusezingeni eliphezulu. Kunoma yikuphi, uma omunye (noma kokubili) abazali akusebenzi, kudingeka incwadi umsebenzi nge irekhodi umsebenzi wokugcina. Izikhungo inaka zonke imali yakho. Kusadingeka usizo isiqinisekiso usendaweni izingane ukutadisha ezikoleni. Ngemva kwalokho, ukulawula ukukhokhwa kwemali.
Ngaphambi ukucabanga, ukuthi imibhalo kudingeka sokubhalisa nesabelo ingane, nquma ukuthi singakanani uwadinga empeleni. Sami izinkokhelo azinakwa, kodwa lokhu isimo ukunika ilungelo lokuthola amabhonasi ezengeziwe ngesimo khulula esikoleni ukudla futhi ukwelashwa spa. Ngesikhathi esifanayo hhayi ngisho nokuzihlupha bezama Kulokhu, uma usebenza ngaphandle umsebenzi ohlelekile, noma uma ubaba wengane engakhokhi nesondlo, ngoba nazo kubhekwe imali. Uyoba ukusebenzisa eningi ukufakazela, lokho akudingeki kubo. Kungakhathaliseki noma cha lokunikeza imizwa yakho - unquma.
Human Resources Umhloli: amalungelo nezibopho
Kanjani ukubala ubude isevisi, noma yonke ubukhulu
Kuyini ufaneleke ukuthola isinxephezelo ngokwehluleka ukubeka enkulisa: umthetho, inani kanye nezincomo
Ngehora amaholo: ngobuhle nangobubi bawo
Imithetho yokwenza amadokhumenti
Impendulo yalo mbuzo othi: "Lapho enza Max 100.500?"
Njengoba ekhishwa namazeze e amazinyane, engesiyo ngisho nengxenye ngonyaka?
Uphawu Courvoisier: ukubonakaliswa nosizo
Cap-Kubanka: umlando, incazelo, amathiphu ngokukhetha
Lahdenpohja: amahhotela kanye zokungcebeleka
Kuyini Pascal. UHlelo e Pascal
"Ballerina" - isithombe unqobile ukuqashelwa emhlabeni wonke
Lena ezithakazelisayo: lizwe ezishisa kakhulu emhlabeni